घरमै भएका श्रीमान १० बर्षदेखि श्रीमतिकाे विस्तारामा नगएकाे खुलाशा गर्दै श्रीमति मिडियामा (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > घरमै भएका श्रीमान १० बर्षदेखि श्रीमतिकाे विस्तारामा नगएकाे खुलाशा गर्दै श्रीमति मिडियामा (भिडियो सहित)
admin September 28, 2020 October 6, 2020 जीवनशैली, भिडियो, समाज	0
काठमाडौ । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा अनौठो खबर सार्वजनिक भएको छ । एउटा महिला आफु माथि परेको अनौठो घटनाका बारेमा सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् । रिता खड्काले आफ्नो अनौठो सम्बन्धका बारेमा खुलासा गर्दै सार्वजनिक गरेकि हुन् । उनको २०६६ सालमा विवाह भएको थियो । तर उनीहरु करिब १० वर्ष देखि संगै छैनन् । उनी श्रीमानको घरमै छन् त्यस्तो वि वा द पनि भएको छैन । समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्***
तर उनीहरुबीच श्रीमान श्रीमतीबीच हुने सम्बन्ध नभएको १० वर्ष भइसकेको छ । छोरासंग सम्बन्ध विग्रिएको १० वर्ष सम्म पनि सासु ससुराको सेवा गरेर बस्दा आफुलाई यस्तो नराम्रो आरोप लगाएपछि उनी वास्तविकता खोल्न मिडियामा आएको बताउँछिन् । परिवारले हे ला गरेका कारण एउटै घरमा भएर पनि उनी अलग्गै खाना पकाएर खाने गरेकि छन् ।
आफ्नो सन्तान (छोरा) लाई एक्लै हुर्काएकि छन् । मलाई सासु ससुराले तिमीहरु सानो इ ज्ज तको परिवार, हाम्रो घर धानेर बस्न सक्दिनस् भन्नुहुन्छ । मेरो बुवा आमाले विवाह गरेर दिएको घर यहि हो म कहाँ जाउँ ? उनले आँ शु झा र्दै भनिन् ।
सानो छोराको आफ्नै जिम्मेवारी लिएर हुर्काएकि उनी विद्यालयमा काम गर्छिन । उनी विहान ८ वजे स्कूल पुग्नुपर्ने र छोराको पनि सबै जिम्मेवारी नि भा उने बताइन् । उनले आफु कानुनका बारेमा केही थाहा नपाएका कारण कुनै प्रकृया नगरेको बताएकी छन् । आफ्ना बारेमा बोलिदिने र सहयोग गर्ने कोही नभएको कारण कानुनी रुपमा जान नसेकेको बताएकी छन् ।
उनले अहिले भने आफुलाई विरामी भएपनि पानी समेत खान दिने मान्छे नभएका कारण मिडियामा आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेको बताइन् । सासु ससुरा बसेकै घरमा छुट्टै बस्ने गरेकी उनले आफुलाई परिवारले हे ला गरेका कारण बिचल्ली भएको बताएकी छन् ।
मितिनी भन्दै अर्काकि श्रीमति घरमै ल्याएका श्रीमानले बिचल्ली पारेर हिँडेपछि घरमा भोकभोकै छोराछोरीकाे यस्तो बिचल्ली! (भिडियो हेर्नुस्)
तीन बालिकालाई सँगै राखेर एयरपोर्टको गेस्ट हाउसमा अमेरिकी नागरिकको यस्तो यौ न लिला